पूर्णबाहादुरलाई सहयोग गरौं: अस्पतालको बेडबाट फेरी उठ्नेछ पूर्ण – Rastriyapatrika
पूर्णबाहादुरलाई सहयोग गरौं: अस्पतालको बेडबाट फेरी उठ्नेछ पूर्ण
। पूर्णबाहादुर तमाङ अमेरिकाको टेक्सास राज्यको अस्टिनमा बसोबास गर्दै आएका थिए। दिउँसो काममा जाने अनि बेलुका घर फर्कने… यस्तै थियो पूर्णको दिनचर्या। पूर्णबाहादुरको जीवनमा एक्कासी यस्तो बज्रपात पर्यो कि त्यो कसैलै सोचेकै थिएन।
केही समय अघि नुहाउँन भनेर बाथरूम पसेका पूर्णबाहादुर उठ्नै नसक्ने गरी लडे! पूर्णबाहादुर हाई ब्लड प्रेशरको बिरामी थिए! बेहोश अवस्थामा उसलाई अस्पताल लगियो। लड्दा पूर्णबाहादुरको टाउकोमा ठूलो असर परेकोले अस्पतालले अवस्था गम्भीर रहेको बताउँदै रगत जम्ने खतरा देखिएपछि पूर्णको टाउको काटेर हड्डी बाहिरा निकालेर राखियो। पूर्णको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म टाउको काटेर सिलाएको छ। उसको शरीरको देब्रे भाग चल्न सकेको छैन !
पूर्णबाहादुरलाई अहिले आईसियू मा राखेर उपचार गराईरहेको छ । पूर्णबाहादुरलाई पुन: अस्पतालको बेडबाट उठेर संसार नियाल्ने इच्छा छ, परिवार अनि साधीभाईहरूसंग रम्न मन छ। २ महिनासम्म अस्पतालमा लडिरहेका पूर्णबाहादुरको उपचार खर्च लाखौं पुगिसक्यो, आफू लडेपछि कतैबाट आमदनी छैन। त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूसंग पूर्णबाहादुर जति सक्नुहुन्छ सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ।
सहयोग गर्नु चाहानुहन्छ भने फोन नंबर : 5125478957
यहाँ क्लिक गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ